Uyithintela njani iselfowuni yakho yeAndrois ekutshiseni kakhulu ukudlala iFortnite | I-Androidsis
Uyithintela njani ifowuni yakho ye-Android ekubeni ishushu xa udlala iFortnite
UEder Ferreño | | Fortnite, Imidlalo ye-Android, Tutorials
I-Fortnite yenye yezona midlalo zidumileyo zangoku kwi-Android. Inani labasebenzisi bomdlalo alikhuli njengoko iintsuku zihamba, kwaye akubonakali ngathi lo mkhuhlane uza kuphela nangaliphi na ixesha. Ngumdlalo ofuna lukhulu kwifowuni yethu, ke kuyinto eqhelekileyo ukuba ubushushu bayo bonyuke ngelixa sidlala kuwo.
Kungenxa yoko le nto uninzi lwabasebenzisi be-Android befuna indlela yokwenza thintela ubushushu befowuni yakho ekunyukeni kakhulu Ngexesha lokudlala iFortnite. Kukho iingcebiso ezilula kakhulu ezinokusinceda kule meko.
Lo mdlalo ufuna amandla amakhulu, ke ayingabo bonke abasebenzisi abaya kuba nakho ukuyidlala. Iimodeli zamanqanaba asezantsi zinokuba nengxaki ngokusebenza komdlalo. Kodwa, ukuba ufuna ukudlala ngaphandle kweengxaki kwaye ngaphandle kokuba ifowuni ishushu kakhulu, ziingcebiso ekufuneka uzilandele.
1 Vala zonke izicelo
2 Sebenzisa indawo epholileyo
3 Sukusebenzisa isiciko
Vala zonke izicelo
Ngomdlalo ofana neFortnite odla kakhulu, elona cebiso libalulekileyo lokugcina engqondweni kukuba kufuneka vala zonke izicelo ezisebenzayo ngelo xesha kwifowuni yethu ye-Android. Ayisizi zicelo kuphela, kufuneka siqinisekise ukuba iinkqubo ezivulekileyo ngasemva kufuneka zivaliwe. Kuba ziinkqubo ezitya amandla kunye nezixhobo, ekuya kuthi ke kule meko zibe yimfuneko ukuze zisetyenziswe xa sidlala.
Ke njengenyathelo lokuqala kubalulekile ukuba masivale zonke iinkqubo ezisebenzayo kwifowuni. Oku kubaluleke ngakumbi kuluhlu oluphakathi okanye iifowuni ezingenamandla esele zinokufikelela kumdlalo. Ngale ndlela siya kuba nakho ukugxila kuzo zonke izixhobo zeprosesa yefowuni yethu kulo mdlalo.
Sebenzisa indawo epholileyo
Ingcebiso oyivileyo ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye Ukuthintela ifowuni ekutshiseni kakhulu kukuyisebenzisa okanye ukuyibeka kwindawo ebandayo. Kuba oku kuya kusinceda sinciphise ubushushu besixhobo. Kule meko, xa udlala iFortnite kunye nefowuni yethu ye-Android, ingcebiso kwakhona iluncedo kakhulu kwaye isebenza ngendlela efanayo.
Ke kungcono kuphephe ukuyibamba kuphela xa udlala. Siyibeka kwindawo ebandayo, nokuba yintoni onayo ekhaya, kwaye ke ngenxa yoko sikwazi ukuthintela ubushushu ekunyukeni kakhulu. Oku kunokuba luncedo, nangona ulawulo lunokuba nzima ngakumbi ukudlala umdlalo. Ke malunga nokuzama nokubona ukuba ungayifaka njani kumphezulu onjalo, kodwa ukuba nje ukhululekile ukuyibamba ngaxeshanye.
Ungayenza ukuba uyanqumama. Ingayiyo kuyeza ixesha apho ufuna ukunqumama khona Ngelixa udlala iFortnite. Ngelo xesha, kuyanceda ukuyibeka kwindawo epholileyo. Ke ngeli xesha ifowuni iya kuba nakho ukunciphisa iqondo lobushushu kwaye ibuyele kubushushu obuqhelekileyo. Ukongeza ekuphepheni iingxaki ezinokubakho ekusebenzeni kwayo, ngenxa yengozi yokuba iqondo lobushushu liyonyuka kakhulu.
Elinye icebo elihlala linikezelwa ukuthintela ifowuni yakho ye-Android ekubeni shushu kakhulu kukususa imeko. Kwakhona, eli licebiso elinokuba luncedo kakhulu kuthi ukuba silisebenzise ngelixa siza kudlala iFortnite. Kuba ityala linokuba negalelo kubushushu befowuni ukuhlala phezulu kakhulu.
Ngoko ke, umzuzu wokudlala umdlalo kwifowuni, susa isiciko. Ekugqibeleni ungayifaka kwakhona njengesiqhelo. Kodwa ngeli xesha sisebenzisa iFortnite, siya kuvumela ifowuni ukuba ingene ngandlel 'ithile kunye nobushushu bayo buhlale bungazinzanga. Ngokusengqiqweni iyakonyuka ngobungakanani bomdlalo oyifunayo ifowuni, kodwa iya kuba mbalwa xa ithelekiswa nexesha esisisebenzisa ngalo ityala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Uyithintela njani ifowuni yakho ye-Android ekubeni ishushu xa udlala iFortnite
I-MIUI 10 ifika kwi-Mi 5, Mi 6, Mi Mix 2 phakathi kwezinye iifowuni
Iifowuni ezimbini ezintsha zeHuawei ziye zavuza kwi-TENAA